“Mgbe Ụfọdụ Ana M Eche na M Nọ ná Nrọ!”
Teta! | Nọvemba 8, 2001
GỤỌ NKE Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Portuguese Romanian Russian Setswana Slovak Slovenian Swahili Ukrainian
Lourdes si na windo ụlọ ha na-elepụ anya n’obodo ukwu ahụ, kpuchie aka n’ọnụ ya na-ama jijiji. Ọ bụ nwanyị Latin America nke hụjuru anya n’aka Alfredo, bụ́ di ya na-eme ihe ike, ruo ihe karịrị afọ 20. A kpaliri Alfredo ime mgbanwe. Ma, ọ ka na-esiri Lourdes ike ikwu banyere ahụ mgbu na ihe mgbu mmetụta uche ndị o diri.
“Ọ malitere nanị izu abụọ anyị gbasịrị akwụkwọ,” ka Lourdes na-ekwu n’olu dị ala. “N’otu oge, ọ kụpụrụ m ezé abụọ n’ọnụ. N’oge ọzọ, ezere m ya, aka ya wee gaa kụrie n’ebe nkowe ákwà anyị. Ma ọ bụ ọnụ ọ na-akọ m na-afụ ụfụ karị. Ọ na-akpọ m ‘ewu iberibe,’ na-emesokwa m dị ka a ga-asị na enweghị m ọgụgụ isi. Achọrọ m ịla, ma olee otú m ga-esi kpọrọ ụmụ atọ laa?”
Alfredo metụrụ Lourdes aka n’ubu n’ụzọ dị nro. “Abụ m onye ọkachamara nọ n’ọkwá dị elu,” ka ọ na-ekwu. “Ihere onwe m mere m mgbe ụlọikpe nyere m akwụkwọ ịkpọ òkù ma nye m iwu ichebe nwunye m. Agbalịrị m ịgbanwe, ma n’oge na-adịghị anya, amalitekwara m ime otú ahụ ọzọ.”
Olee otú ihe si gbanwee? “Otu nwanyị na-anọ n’otu ụlọ ahịa dị n’akụkụ okporo ámá anyị bụ otu n’ime Ndịàmà Jehova,” ka Lourdes na-akọwa, bụ́ onye ọ pụtara ìhè na ahụ erutụkwuola ya ala ugbu a. “O kwuru na ya ga-enyere m aka ịghọta Bible. Amụtara m na Jehova Chineke ji ndị inyom kpọrọ ihe. Amalitere m ịga nzukọ Ndịàmà Jehova, n’agbanyeghị na ná mmalite o were Alfredo oké iwe. Ọ bụ ahụmahụ ọhụrụ nye m bụ́ iso ndị enyi m nọkọọ n’Ụlọ Nzukọ Alaeze. O juru m anya ịhụ na m pụrụ inwe nkwenkwe nke m, na-ekwupụta ha n’enweghị ihe mgbochi, ọbụnakwa na-akụziri ya ndị ọzọ. Aghọtara m na m bara uru n’anya Chineke. Nke a nyere m obi ike.
“E nwere oge oké mgbanwe nke m na-agaghị echefu echefu ma ọlị. Alfredo ka nọ na-aga Mas ndị Katọlik kwa Sunday, ọ nọkwa na-eme mkpesa banyere ihe mụ na Ndịàmà Jehova na-eme. Elere m ya anya ná mkpụrụ anya ma jiri obi ike kwuo n’ụzọ dị jụụ, sị: ‘Alfredo, echiche gị abụghị echiche m.’ Ma o tighị m ihe! N’oge na-adịghị anya mgbe e mesịrị, e mere m baptism, o tibeghịkwa m ihe ọzọ n’ime afọ ise gaferela kemgbe ahụ.”
Ma mgbanwe ka ukwuu na-abịa. Alfredo na-akọwa, sị: “Ihe dị ka afọ atọ e mesịrị Lourdes baptism, otu onye ọrụ ibe m nke bụ́ otu n’ime Ndịàmà Jehova kpọrọ m ịbịa n’ụlọ ya, ọ kọwakwaara m ihe ndị na-akpali mmasị site na Bible. N’agwaghị nwunye m, amalitere m iso ya na-amụ Bible. N’oge na-adịghị anya, amalitere m iso Lourdes na-aga nzukọ. Ọtụtụ n’ime okwu ndị m nụrụ n’ebe ahụ bụ banyere ndụ ezinụlọ, ha na-emekarịkwa m ihere.”
A kpaliri mmasị Alfredo mgbe ọ hụrụ ndị nọ n’ọgbakọ, gụnyere ndị ikom, ka ha na-azacha ala ụlọ mgbe e mechisịrị nzukọ. Mgbe ọ gara n’ebe obibi ha, ọ hụrụ ndị bụ́ di ka ha na-enyere nwunye ha aka ịsa efere. Obere ihe ndị a gosiri Alfredo otú e si egosipụta ezi ịhụnanya.
N’oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, e mere Alfredo baptism, ugbu a kwa, ya na nwunye ya na-eje ozi dị ka ndị ozi oge nile. “Ọ na-enyere m aka mgbe mgbe n’ịkwachasị tebụl mgbe e risịrị nri nakwa n’imezi ihe ndina,” ka Lourdes na-ekwu. “Ọ na-aja m mma ma m sie nri, ọ na-enyekwa m ohere ịhọta ihe—dị ka egwú ga-amasị m ige ma ọ bụ ngwá ụlọ ndị anyị ga-azụta. Ihe ndị a ka Alfredo na-agatụghị eme na mbụ! Na nso nso a, na nke mbụ ya, ọ zụtaara m otu ùkwù okooko osisi. Mgbe ụfọdụ ana m eche na m nọ ná nrọ!”
“Aghọtara m na m bara uru n’anya Chineke. Nke a nyere m obi ike”
Ọ hụrụ ndị bụ́ di ka ha na-enyere nwunye ha aka ịsa efere
A kpaliri mmasị Alfredo mgbe ọ hụrụ ndị òtù ọgbakọ, gụnyere ndị ikom, ka ha na-azacha ala ụlọ mgbe e mechisịrị nzukọ
“N’oge na-adịbeghị anya, na nke mbụ ya, ọ zụtaara m ùkwù okooko osisi”
“Ikekwe Ọ Ga-agbanwe na nke Ugbu A”
Gịnị Mere Ndị Ikom Ji Eti Ndị Inyom Ihe?
Enyemaka Maka Ndị Inyom A Na-eti Ihe
Ihe Mere Ike Ndụ Ji Agwụ Ndị Mmadụ
Ị Pụrụ Inweta Enyemaka
Gịnị Dị Njọ n’Imegwara Ihe?
Ojiji Chineke Na-eji Ike Eme Ihe—Ò Ziri Ezi?
Mama na Ụmụ Ya Ndị Nwanyị Iri
‘Nnwale ahụ Akụọla Afọ n’Ala’
Ọchịchị Nchịgbu Mmadụ Chịrị Ibe Ya
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu MAGAZIN Nọvemba 8, 2001
Nọvemba 8, 2001
MAGAZIN Nọvemba 8, 2001